Flekosteel gel nweta mbelata na Victoria Island
Flekosteel na Victoria Island Naijiria
Zụrụ Flekosteel Nkwekọrịta Mgbu mgbu na Victoria Island
Gel megide nkwonkwo na mgbu azụ Flekosteel ga-eme ka mmụghachi nke anụ ahụ cartilage ngwa ngwa. Ị nwere ike ịzụta gel na obodo Nigeria na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ị nwekwara ike ịtụ ịnyefe na Victoria Island. Ọnụ ego mbelata bụ naanị ₦14990, nkwalite ahụ nwere oke.
Ị nwere ike ịtụ ọgwụ ugbu a na ọnụ ahịa gọọmentị, ịkwesịrị imejupụta mpempe akwụkwọ na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Naanị gosi nọmba ekwentị maka nkwukọrịta na aha gị, onye njikwa anyị ga-akpọ nọmba akọwapụtara n'ime otu elekere wee zaa ajụjụ gị niile. Tupu ịtụ ahịa, anyị na-akwado ka ị mụọ ntuziaka maka ojiji Flekosteel. Kwụọ onye na-ebu ozi ma ọ bụ site na mail naanị site na ego a na-ebuga na ngwugwu ahụ.
Otu esi azụta na Victoria Island Flekosteel
Nye iwu gel megide mgbu na nkwonkwo na azụ Flekosteel na Victoria Island
Ọtụtụ nwere mmasị na ebe ị nwere ike ịtụ Flekosteel gel maka nkwonkwo na azụ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa? Enweghị ike ịchọta gel na counters nke ụlọ ahịa ọgwụ na-anọghị n'ịntanetị na Victoria Island, yana na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ọgwụ. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ọgwụ naanị na webụsaịtị gọọmentị nke onye nrụpụta, dejupụta mpempe akwụkwọ ka onye ọrụ anyị wee kpọtụrụ gị. Taa enwere mbelata, ọnụahịa ngwaahịa ahụ bụ naanị ₦14990, ọnụ ahịa nnyefe na Victoria Island (na Nigeria), lelee onye ọrụ.
Ọnụ ego nke izipu ngwugwu site na mail ma ọ bụ onye ozi nwere ike ịdị iche dabere na obodo ahụ. Mgbe onye njikwa ahụ kpọchara, chere maka ngwugwu ahụ ma kwụọ ụgwọ ngwa ahịa mgbe ị natara ya. Ịkwụ ụgwọ maka iwu site na mail, ọ pụkwara iji aka ma ọ bụ kaadị kwụọ onye na-ebufe ya. Ogologo oge nkwalite ahụ nwere oke. Mee ngwa ngwa ịtụ ahịa na mbelata 50%. Ị nwere ike ịtụ ngwa ahịa na Victoria Island (Nigeria) ugbu a.
Flekosteel na Bauchi Flekosteel na Gusau
ịtụ ịtụ Flekosteel na Victoria Island 50% nke ọ bụla